किन निरज र क्रिस्टिनाको रोमान्स बिचबाटोमा नै छुट्यो ? « OSNepal.com :: Latest News,Breaking News, Latest, Politics, World, Entertainment, Sports, Technology, Interview, Nepal News
किन निरज र क्रिस्टिनाको रोमान्स बिचबाटोमा नै छुट्यो ?
काठमाडौँ । सुरज थापा, नेपाली संगीतिक क्यानभासमा मिठो स्वर बनेर पोखिएका छन । गायन र संगीतमा राम्रो दखल भएका सुरजले भो माया अब लाउदिन बोलको गीतको म्युसिक भिडियो बजारमा ल्याएका छन ।
प्रेमी बिचको असमझदारिले वियोगको अबस्थामा पुगेको प्रेम कथालाई बियोगात्मक रुपमा प्रस्तुत गरिएको यस म्युजिक भिडियोमा निरज र क्रिस्टिनाको कुशल अभिनय रहेको छ भने यसलाईं म्यूज़िक ज्वाइ मीडियाले बजार ब्यबस्थापना गरेको छ ।
किरण कडेलको संगीत समायोजन र स्वयम गायकको संगीत रहेको यस गीतको रचना नभ तिम्सिनाको रहेको छ। उकिशन गुरुङ र समरा लामाको स्रिङार तथा अर्जुन तिवारी र साथिहरुले छायान्कन गरेको यस म्युजिक भिडियोमा निशान घिमिरेको सम्पादन र निकेश खडकाको निर्देशन रहेको छ ।
साङितिक बातावरणमा सानै देखि हुर्केका सुरज प्रसिद्द गयिका तिर्थ कुमारी थापाका सुपुत्र हुनु हुन्छ भने वहाँ नेपथ्य समुहमा पनि आबद्द छन । यस अघि पनि उनको गहिरो घाउ दिलमा बोल गित निकै लोकप्रिये बनेको थियो ।